साहित्य - जागरण अनलाइन
कथा–निसास्सिएर फुलेको प्रेम
रमेश पाण्डेय मैले एक दुई गरेर गनेको भए पनि बाह्र, पन्ध्र जना जति थिए होलान् । म छेउको कुर्सीमा गएर थपक्क बसेँ । चारैतिर नजर पुर्‍याएँ । धेरै जसो त विवाहित महिला जस्ता देखिन्थे तर म अविवाहित । सबैले मलाई नै हेरिरहेको जस्तो लागिरह्यो । म बोल्न सकिनँ । टक्क मेरो आँखा आमाले दूध खुवाइरहेको
२०७५ पुष २०, शुक्रबार १६:०५
दाङको सिडिओको यस्तो छ रचना
गोविन्दप्रशाद रिजाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ हाल्यो उसले आज मुहार ऐनामा र चिन्यो आफ्नै अनुहार ऐनामा ।। अनुहारभित्रका वक्ररेखाहरू पढेरै खोज्यो जिवनको मुलधार ऐनामा ।। आफ्नै आकृति देवता देख्यो क्यारे गरयो पुजाआजा र पुकार ऐनामा ।। समयसँगै वदलिन जानेन ऐनाले अझेै गर्न बाँकि छ सुधार ऐनामा ।। हाल्यो आज उसले मुहार ऐनामा
२०७५ मंसिर २८, शुक्रबार १८:०९
दुर पहाडमा जन्मिएर
दुर पहाडमा जन्मिएर बन बुटी र कन्दमुल खाँदै शैशवकाल बिताएको एक थान किशोर । जसलाई कहिल्यै समस्या, अभाव र पीडाले छोडेनन । आफ्नै छाँया जस्तै साथ नछाड्ने दु:ख आँखा खोल्न बित्तिकै नजर लाग्ने वेदना सुख्खा बालुवामा छटपटाइरहेको माछाको जस्तै पीडा यी यावत कुरा संधै संधै साथ रहे । र पनि एक जवान जीवनको सगरमाथा चढ्न
२०७५ भाद्र २४, आईतवार २१:४९
दीपक जी.एम ” आर्जव ” दिन सधँै एकनासको हुँदो रहेनछ । ती दिनहरु थिए जब म उनलाई प्रत्येक दिन देख्ने गर्दथे र उनको मुहार हेर्न भौतारिने गर्दथे । तर, समयसँगै उनको एक झल पाउन पनि गाह्रो हुँदै गयो । मन खिन्न हुन थाल्यो । सायद मनलाई थाम्न साह्रो भइसकेको थियो । राहुल मेरो अतिनै
२०७५ भाद्र ९, शनिबार १०:५२
राजिब गौतमका तीन मुक्तक
निधारमा नाम्लो , पिठ्युमा डोको र घैलामा पानी बोकेर बसेकीछिन, ठेला परेका हातहरुले जङ्गलमा दाउराको भारी कसेर बसेकी छिन । म सङ्ग बिहे गरेर तिमी खुशी हुन कसरी सकौली र पृया , मेरी आमा त भोको पेटमै पानी घट्टमा पालो कुरेर बसेकी छिन ।। महङ्गाइले घाँटी थिच्नलाई ,निमुखा र सोझा हेरेर बसेको छ, छोरा छोरीको
२०७५ भाद्र ७, बिहीबार ०९:४२
कविता– शुभयात्रा प्रिय डाक्टर !
केएम निष्ठुरी(केशरमान बुढाथोकि) समय पनि कति निष्ठुर नियति पनि कति कठोर पाहुना छाक नै टार्न नपाइ सबै संग न्यानो माया साट्न नपाइ मन खोलेर भित्रैबाट हाँस्नै नपाइ सैलेरीहरु संग उत्सवमा नाच्नै नपाइ ब्यस्तै ब्यस्तमा मस्तै मस्तमा खै कसरी बितायौ ती ८ बर्ष ? मात्र ८ दिन लाग्छ तिमी आएको न कसैलाई रुवायौ न कसैलाई चिडायौ
२०७५ भाद्र ७, बिहीबार ०८:३४
युवा अभियन्ता जीवन अर्यालको मनछुने कविता ‘अव बनाउनुपर्छ हाम्रो नेपाल’
जीवन अर्याल, स्याङ्जा पुर्व प्रवासी सन्जाल सम्योजक गण्डकी प्रदेश हजारौ बाध्यताहरुमा पिल्सिएर मुटुमाथी ढुङ्गा राखि सात समुन्द्र पारी उडिम त्यो कलिलो उमेरमा रहर र बाध्यताले पालो पालो सिउरी खेल्ने यो मैदान यो जीवन, एउटा आखामा सपना, अर्कोमा आफ्नै पाखा पखेराको छाया बनेर बसे बर्षौ सम्म त्यो परदेशमा मेरा आखाका दुइ नानि बाहिर हेर्दा हसिलो मुहार,
२०७५ श्रावण १३, आईतवार १७:०८
तिमीले पराइ ठानेपछि…
गीत कसरी, कहाँ, कस्तो परिस्थिति र समयमा लेखिन्छ ? यो प्रश्नमा हरेक गीतकारका फरकफरक जवाफ आउँछ । कसैले राति सपनामा देखेको गीतलाई ब्युँझिएर उतार्छन् । कोही गीत लेख्नकै लागि एकान्त खोज्छन् । कोही कसैले दिएको विषयवस्तुको फेरो समाएर लेख्छन् त कोही ट्युनिङको परिधिमा बाँधिएर गीतका स्थायी र अन्तरा खोज्छन् । सासुआमालाई पाल्पा अस्पताल लिएर गएका
२०७५ श्रावण ३, बिहीबार १४:०६
दाङमा कवि प्रसन्नको मिझोर माथी बहस
दाङ, असार ९ । नेपाली समकालिन कवितामा फरक धारलाई पछ्याईरहेका कवि प्रसन्न घिमिरे आफ्ना कविताहरु सहित दाङका साहित्यकारहरुको माझ पोखिएका छन् । शब्दहरुलाई कोमल रुपमा खेलाएर निर्माण गरेको कविताहरुको संग्रह मिझेर माथी बहस गरीएको छ । उदाहरण समूह, नेपालको ब्यानरमा भएको बहसमाथी स्पष्टिकरणका लागि उभिएका कवि प्रसन्न घिमिरेले कविताका बारेमा बहस गरे । जुनेलीको विषले
२०७५ असार ९, शनिबार २०:२८
अनिता आचार्य पत्रकारकी स्वास्नी सोझी थिई । लप्पनछप्पन नजानेकी । अनुहारमा ढकमक्क तिलकोठी थिए । सोझो पारा की । चरित्रवान् । नौंटकी नजानेकी । तर, उसको लोग्ने त्यस्तो थिएन । चतुरो थियो उट्पट्याङ गर्न जानेको । यताको कुरो घुमाएर उता पुर्याएर मिलाउँथ्यो । पत्रकार जो थियो । निर्मला सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्केकी थिई । उसको
२०७५ जेष्ठ २९, मंगलवार १६:००
राप्तीका विभिन्न श्रष्टाहरु पुरस्कृत
नवीन अभिलाषी दाङ, बैशाख १७ । राप्ती साहित्य परिषदले विभिन्न विधाका श्रष्टा, सञ्चार माध्यम र पुरस्कार सस्थापकहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गरेको छ । राप्ती साहित्य परिषद्को वार्षिकोत्सव तथा वृहत् साहित्यिक समारोहमा विभिन्न प्रतिभाहरुलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको हो । परिषद्को यसवर्षको राप्ती साहित्य पुरस्कार दाङका वरिष्ठ साहित्यकार उत्तमकृष्ण मजगैयाँलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाली
२०७५ बैशाख १७, सोमबार १५:३५
थारु संग्रहालयमा आकर्षण बढ्दै
सन्तो ष दहित घो राही  । दंगीशरण गाउ“पालिका वडा नं. ३ चखौ रामा रहे को थारु संग्रहालय सबै को आकर्षण बन्दै गएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम घो राहीदे खि ३६ किलो मिटर पश्चिममा रहे को संग्रहालयमा हिजोआज भीड लाग्ने गरे को स् थानीयहरुले बताउने गरे का छन् । के ही वर्ष अगाडिसम्म बे स संस् थाको हो स् टे लको रुपमा चिनिएको ठाउ“लाई थारु संग्रहालयमा परिणत गरे पछि हे र्न आउने हरुको संख्या बढ्दै गएको हो  । संग्रहालयमा थारु
२०७५ बैशाख १३, बिहीबार २३:३८
हेमराज डाँगिको कोमल वलिका लागि गजल
आजभोली नया नेपाल भन्दै अघि लाकी छेउ रे छोटो कपाल गाजले आँखा झनै राम्री भाकी छेउ रे कोइलिको जस्तै स्वर तिम्रो सुन्न नपाको धेरै भयो सबै कुरा बिर्सी अब देशको सेवामा लाकी छेउ रे तिम्रो मिठो गीत बोलिमा मक्खै पर्ने हामी नेपाली दङ्गालीको त कुरै छोडम सन्सार भरी छाकि छेउ रे आइ फेरि एकपटक अरनिको
२०७४ चैत्र २५, आईतवार १८:४१
रेडियो नेपालको ६८ औँ वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलि सम्मानीत
काठमान्डौ, चैत २० । रेडियो नेपालले आफ्नो ६८ औँ वार्षिकोत्सव भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको उद्घाटन नेपाल सरकारका सञ्चार राज्यमन्त्रि गोकुल वास्कोटाले गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा लामोसमय रेडियो नेपालमा बरीष्ठ सम्पादक तथा समाचार वाचिका भएर काम गर्नु भएकि चर्चीत लोक गायिका तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलिलाई सम्मान गरीएको थियो
२०७४ चैत्र २०, मंगलवार २०:४२
साहीत्यकार घनश्याम अस्तित्वको मनछुने कविता ‘गाउँको बस’
रूखो आचरणमा यात्रुहरू ओहोरदोहोर गराउने बस मात्रै होइन ( गाउँको बस । बिहान भालेसंगै बास्छ र ब्युँझाउछ ( डोको, नाम्लो र अगेनोलाई बच्चाबच्ची कक्षा छिर्नु अघि छोडि फर्किने आमालाई बोलाइरहे जस्तो घरीघरी बोलाउछ ( हिँड्नु अघि सदरमुकाम बाटोका खाल्डाखुल्डीको लयमा ब्रेक डान्स गर्दै हिँड्ने उसले बुढा बाआमाको प्राण छ, छैन सोध्छ ( दम, प्रेसरको औषधी
२०७४ चैत्र ९, शुक्रबार २०:४४
उदाहरण समुहमा नथिया उपन्यासको वहस
घोराही, फागुन २८ । उदाहरण समुह नेपालको आयोजनामा सरस्वती प्रतिक्षाको उपन्यास नथियामाथि बहस कार्यक्रम आज घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । लेखक सरस्वती प्रतिक्षाको उपस्थीतिमा शुरु भएको कार्यक्रममा बहसकर्ताहरुमा निर्मल नेपाली बादी र निर्मला कुमारी बादी गुप्ता रहनुभएको थियो । उपन्यासकार सरस्वती प्रतिक्षाले बादी समुदायका महिलाहरुको जिवनमा आधारित पुस्तक नथियाले २०४०सालभन्दा अगाडी दाङ जिल्लामा रहेका बादी
२०७४ फाल्गुन २८, सोमबार १९:०९
उदाहरण समुहको स्टेजमा गीत र गजल
दाङ, फागुन १९ । साहित्य, कला र संगीतको क्षेत्रमा ४ वर्ष देखि काम गर्दै आएको उदाहरण समुह नेपालले घोराहीमा केहि गीत केहि गजलहरु कार्यक्रम गरेको छ । नेपाली साहित्यको विधा गीत र गजललाई जोडेर उदाहरण समुह नेपालले घोराहीमा युवाहरु संग कार्यक्रम गरेको हो । रुकुमका उदीयमान लेखक भुपाल रावतको पहिलो गीत गजल संग्रह सम्झनाका पलहरुको
२०७४ फाल्गुन १९, शनिबार १९:५४
गजल/गीत २०७४ फागुन १२ शनिवार अादिम के.सी. चर्चा छ रे अचेल बजारमा तिम्राे चर्चा छ रे कसम हजारमा तिम्राे पहिलाे भेटमै मन घाइते भएसी सबका नजरमा तिमीलाई पाएसी चर्चा छ रे प्रेम दरबारमा तिम्राे चर्चा छ रे कसम हजारमा तिम्राे मेराे मायामा यहाँ दरार भएसी तिम्राे मायामा त्यहाँ करार भएसी चर्चा छ रे
२०७४ फाल्गुन १२, शनिबार २१:५५
प्रियासनको सातौ कृति सहनशीला उपन्यासको एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विमोचन गरे
उपाध्यक्ष गौतमले भने–उपन्यासले महीलाको सवालमा वाहीर ल्याउन सहयोग पुर्याउछ’ काठमाडौं । पत्रकार एवं साहित्यकार सविन प्रियासनको सातौ कृति सहनशीला उपान्यासको आइतबार काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ . नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले सहनशीला उपन्यासको विमोचन गर्नु भएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रियासनको
२०७४ माघ २२, सोमबार ०८:२८
निबन्ध–म फेरी गाउँ उक्लिए…
घनश्याम अस्तित्व म बारम्बार लेखिरहन्छु, जीवन भन्नु उछुट्टिरहनु रहेछ । यो स्वभाव, यो प्रेम, यो यात्राबाट कोही पर छैन । तर यसको हिर्काइले सिर्जित हुने भावुकता, संवेग र अनुभूति फरकफरक होलान् । फरकफरक हुनुपर्छ । उछुट्टिनु रहर, आवश्यकता र बाध्यता पनि बनिदिन्छ । निकै लामो सोंचपछि म घोराही छोड्ने निर्णयमा पुगे । बल्ल मलाई फुसर्द
२०७४ माघ २०, शनिबार १५:१०
नित्यानन्द शर्माको स्मृतिग्रन्थको लोकापर्ण गरीने
घोराही, माघ १८ । निन्यानन्द शर्मा स्मृतिग्रन्थको लोकापर्ण गरिदैछ । ग्रन्थका प्रधान सम्पादक उत्तमकृष्ण मजगैयाले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै यहि माघ २०गतेका दिन नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा दिउसो ११.३०बजेको समयमा निन्यानन्द शर्मा स्मृतिग्रन्थको लोकापर्ण कार्यक्रम गरिने भएको हुदा उक्त कार्यक्रममा साहित्यकार,पत्रकार,शुभेच्छुक लगायत सबैमा उपस्थिीतिका लागी सम्पादक मजगैयाले सबैमा सादर अनुरोध गर्नुभएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका
२०७४ माघ १८, बिहीबार १७:५२
संगीतकार श्रेष्ठको एल्बम ‘सुरक्षा’ को परिचर्चा
आभास बुढाथो की घो राही । सकिएला संसार छोड्न दे श छो ड्न सकिन्न मुटु फुटे जो डिएला चु“डिएको दे शलाई तर कै ले जो ड्न सकिन्न । संगीतकार सन्तो ष श्रे ष्ठको राष्ट्रिय भावले पूर्ण गीत संग्रह ‘सुरक्षा’ भित्र रहे को यो राष्ट्रभक्ति गीतले सभामा उपस् िथत सबै को मुहारमा राष्ट्रभक्ति झल्कायो  । ‘सा“च्चै दे श फुटे जो ड्न सकिदै न’ सबै को निष्कर्ष थियो  । संगीतकार सन्तो ष श्रे ष्ठको एकल राष्ट्रिय भाव गीतसंग्रह सुरक्षाको परिचर्चाका
२०७४ माघ ५, शुक्रबार १८:०५
अध्याँरो र विचार
जीवन कहानी हो । हामि पात्र हौं – ईश्वरको आख्यानमा लेखिएको । धेरैले भने यो कुरा । हुन पनि होला । नहुन पनि सक्छ । सोंचको ब्रह्माण्ड ठुलो छ – धेरै ठुलो । जताजता पनि पुग्छ । घुम्छ । सोंचले जति भ्याउछ उत्ति सोंच्ने हो । कहिलेकाहीँ कथा भित्र पनि कथा जन्मिदिन्छ । हामि नै
२०७४ पुष २४, सोमबार ०८:४०
राप्ति समाज काठमाण्डौको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौ/ राप्ति समाज काठमाण्डौले आज काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राप्ति वाट प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा विजयि संसद तथा राप्ति वाट पत्रकार महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व लाई सम्मान गरेको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डप स्थित महेन्द्र प्रहरी क्लवको हलमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्मान गरीएको थियो । कार्यक्रममा अधिकांश वक्ता हरुले राप्ति अञ्चल भनेर वर्तमान अवस्थामा
२०७४ पुष २१, शुक्रबार २१:००
सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट युवा पुरस्कार
दाङ, पौष ९ । सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट युवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल जेसीज केन्द्रीय कार्यालयद्वारा नेपाली साहित्य, कला, सङ्गीत तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए बाफत प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने उत्कृष्ट युवा पुरस्कार यस वर्ष श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको हो । पुरस्कार छनौट जेसी लालमणी पन्तको संयोजकत्वमा छनौट गरिएको हो । साहित्य, कला,
२०७४ पुष ९, आईतवार १६:१९
सुरेश सुमनको मनछुने गजल
आगोले भन्दा बचनको वाणले पोल्छ हजुर चोट नदेखिए नी भित्र भित्रै पिरोल्छ हजुर गल्ती मैले गरिनँ भन्छ, सच्याउने कुरै छैन सुल्झाउने कसरी समस्या अन्यौल छ हजुर केही नसोची सजाय दिनु भो तपाईले आज आवाज नहुनेले कसरी मुख खोल्छ हजुर उहिले–उहिले रावणले ताण्डव मच्चाउथ्यो रे हिजो आज रामले नै यज्ञ बिथोल्छ हजुर बिक्रिमा छैन भन्दा नी
२०७४ पुष ८, शनिबार २०:४६
प्रलेश दाङले आज स्थापना दिवस मनाउँदै
घोराही, ३ पुस । प्रगतीशील लेखक संघ नेपाल दाङले आफ्नो २५ औ स्थापना दिवस घोराहीमा मनाउन लागेको छ । आज घोराही स्थित राप्ती साहित्य परिषद्को सभाहलमा कार्यक्रमको आयोजना गरी २५ औ स्थापना दिबस मनाउन लागेको हो । विभिन्न श्रष्टाहरुलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्दै स्थापना दिवस मनाउने भएको हो । त्यसको लागि सम्पुर्ण तयारी पुरा
२०७४ पुष ३, सोमबार ०९:१६
प्रलेस पुरस्कार डाँगीलाई, चिन्तामणि जमुना पुरस्कार शर्मालाई
घोराही, २७ मंसिर । प्रगतिशिल लेखक संघ नेपाल दाङले शाखाको २५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा चारजना साहित्यकारलाई पुरस्कृत गर्नेभएको छ । प्रलेस दाङका अध्यक्ष शरद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिभा छनौट समितिले चार जना साहित्यकारलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमध्य प्रलेस दाङमा स्थापना गरिएको प्रगतिशील साहित्य पुरस्कार यस बर्ष प्रलेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका
२०७४ मंसिर २७, बुधबार २०:१२
कथा : वेदनाको पोको
दीपक जी.एम. ” आर्जव ” मायाको परिभाषा थाहा नभएका कमै होलान ,दुई अक्षरले बनेको माया भन्ने शब्दलाई जति बुझ्न खोज्यो त्यति नै डुब्न बाध्य हुन्छन जो कोही पनि….! ठूलो खानदानकी एक्ली छोरी रश्मि जसको पालन पोषण ,स्याहार सुसारमा कुनै कमी भएन । उध्योगपति रण बहादुर शाहको नाम नसुनेको कमै मात्रामा थिए होलान,गरिबीको गन्ध समेत मन
२०७४ मंसिर १७, आईतवार ०९:२०
साहित्यकार भिमकान्त शर्माको सम्झनाका तरेलि पुस्तक विमोचन
साहित्यकार भिमकान्त शर्मा आचार्यको सम्झनाका तरेली नामक पुस्तक आज बिमोचन गरिएको छ । लेखक संघ दाडले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पुस्तक बिमोचन गरेको हो । लेखक संघ दाडका अध्यक्ष खगराज न्यौपानेको अध्यक्षता तथा साहित्यकार बलदेब शर्मा मजगैयाको प्रमूख आतिथ्य तथा नारायणप्रसाद शर्माको बिशिष्ट आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा शर्माको कृती सम्झनाका तरेलीका बारेमा थानेश्वर गौतमले समिक्षा
२०७४ मंसिर १६, शनिबार २२:२१